အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | ထိုင်ဝမ်တွင် 47 နှစ်ကြာ Handheld Air Tools & Pneumatic Tools | GISON
အမေးများသောမေးခွန်းများ (FAQ) | GISON MACHINERY CO., LTD.
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ / အမေးအဖြေ - GISONAir Tools / Pneumatic Tools - ထိုင်ဝမ်တွင် ထုတ်လုပ်သည်။
Air Tools / Pneumatic Tools များသည် လေမော်တာကို အလုပ်လုပ်စေရန် တွန်းအားပေးသော လေကို ကွန်ပရက်ဆာမှ ပံ့ပိုးပေးသော လေကို အသုံးပြုသည်။ မီးလောင်လွယ်သော၊ ပေါက်ကွဲနိုင်သော၊ ဖုန်ထူသော၊ စိုစွတ်ပြီး ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခေတ်မီစက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း၊ မော်တော်ကား၊ လေယာဉ်ပျံစသည်ဖြင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မညစ်ညမ်းစေဘဲ တာရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်သော သက်တမ်း၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အလှဆင်ခြင်း၊ သတ္တု / သစ် / ကျောက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ဖြန်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း နှင့် အခြားနေရာအများအပြားတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများစွာကို ခေတ်မီသော အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
3. လေခွင်းအားလျှပ်စစ်မော်တာ၏ pneumatic tool သည် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကဲ့သို့ ဝန်ပိုနေသော်လည်း လျှပ်စစ်မော်တာနှင့်မတူဘဲ ဝန်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်၊၊
6. ပါဝါကိရိယာများ၊ လေကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အစောပိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် ဓာတ်အားပေးကိရိယာများ (လေကွန်ပရက်ဆာများနှင့် လေလိုင်းများ) ထက် ပိုမိုများပြားသည်။
စျေးကွက်တွင် reciprocating၊ vane၊ screw သို့မဟုတ် centrifugal ကဲ့သို့သော ကွဲပြားသော လေစုပ်ကိရိယာ အမျိုးအစားအချို့ရှိပါသည်။
စစ်ထုတ်ထားသောလေသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 80 psig (5.5 kg/cm2) ~ 110 psig (7.6 kg/cm2) ဖြစ်သည်။ Air Tools များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 90 psig (6.3 kg/cm2) ကို အသုံးပြုသည်။
အဲယားကွန်ပရက်ဆာ ရွေးချယ်မှု သတ်မှတ်ချက်-
ကွန်ပရက်ဆာအမျိုးအစား - အကြံပြုချက်-
0 မှ 80 psig (5.5 Bar) : single stage air compressor
80 to 250 psig (17.2 Bar) / ကိရိယာများကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှု : two-stage air compressor
Total Air Consumption - ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား SCFM
Factors : လေကိရိယာများ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် အခြားလေသုံးစွဲမှု ပြောင်းလဲနိုင်သော လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
အဲယားကွန်ပရက်ဆာ စွမ်းရည် - မြင်းကောင်ရေ (HP) သည်
စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား SCFM : D (1 m3/min = 35.3147 SCFM ) သတ်မှတ်ပြီး
စနစ်ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများအတွက် ခန့်မှန်းခြေ 20% ပေါင်းထည့်ပါ။ : D1 = D x 1.2
အကယ်၍ D1 <= 100 SCFM : HP = D / 4
အကယ်၍ D1 > 100 SCFM : HP = D / 5
လေကိရိယာတစ်ခု၏ လေသုံးစွဲမှုသည် 0.45 m3/min = 0.45 x 35.3147 = 15.89 SCFM ဖြစ်ပါက
စနစ်ပြောင်းလွဲမှုများ သို့မဟုတ် အနာဂတ်တိုးတက်မှုအတွက် ခန့်မှန်းခြေ 20% ထည့်ပါ။ : 15.89 SCFM x 1.2 = 19.068 SCFM
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 19.068 SCFM <= 100 SCFM ဖြစ်သောကြောင့် HP သည် 19.068 /4= 4.767
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5HP air compressor သည် စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်အတွက် လုံလောက်ပါသည်။
သယ်ယူခကို ထုထည်နှင့် အလေးချိန်ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။ လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအား ထုထည် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ဖြင့် တွက်ချက်ပြီး စျေးအကြီးဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု အများစုကို ထုထည်ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။
စျေးနှုန်းသည် တစ်ကုဗမီတာ သို့မဟုတ် တစ်ကုဗမီတာအပေါ် ကောက်ခံမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သင်္ဘောခကို တွက်ချက်ပြီးမှသာ သယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်တိန်နာများ၏ အလျား၊ အနံနှင့် အမြင့်တို့ကို တိုင်းတာပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါပုံသေနည်းကို အသုံးပြုပြီးနောက် ဖြတ်ပိုင်းကို တွက်ချက်သည်။
A. အလျား x အနံ x အမြင့် (Cm)x 0.0000353 = _______ Cuft (ဆိုလိုသည်မှာ ကုဗပေ)
B. _______ Cuft ÷ 35.315 = ______ CBM (ဆိုလိုသည်မှာ ကုဗမီတာ)